Dhageyso: Wasiirka A/G oo ka dhawaajiyey laba arrin oo xasaasi ah oo horyaal madaxweyne Xaaf - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Wasiirka A/G oo ka dhawaajiyey laba arrin oo xasaasi ah oo...
Dhageyso: Wasiirka A/G oo ka dhawaajiyey laba arrin oo xasaasi ah oo horyaal madaxweyne Xaaf
Cadaado ( Caasimadda Online) – Waxaa lasoo gabagabeeyey doorashadii Galmudug, waxaana qudbado kala duwan jeediyey madaxdii kasoo qeyb gashay oo uu kamid ah wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax Guxa, musharixiintii laga guuleystay iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax Juxa oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweenayaan madaxwyenaha cusub ee Galmug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, isla markaasna wuxuu u sheegay inay hor yaalaan arrimo aad xasaasi u ah.
Wuxuu tilmaamay in madaxweynaha laga rabo inuu si deg deg ah wax uga qabto laba arrin oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ugu horeeyo ee madaxwyenaha looga Fadhiyo.
Midda koowaad ayuu juxa ku sheegay in Xaaf laga doonayo sidii uu Ahlu Sunna ugu soo dari lahaa Maamulka Galmudug isla markaasna uu sii dhameystiro wadahadaladii u socday labada dhinac.
Sidoo kale wuxu wasiirka sheegay in sidoo kala Xaaf laga rabo inuu si wanaagsan u maamulo Galmudug isla markaasna uu ka shaqeeyo amniga deegaanada maamulkiisa, isagoo ka dhawaajiyey inay dowladda Soomaaliya u garab istaagi doonto arrintaas.
Ugu dambeyntii wasiirka ayaa tilmaamay in doorashadii ka dhacday Galmudug ay tahay mid xalaal ah oo ay ku qanceen dhammaan shacabka Galmudug iyo dowladda Soomaaliya, wuxuuna u mahadceliyey xildhibaanada Galmudug oo uu ku tilmaamay inay si wanaagsan uga shaqeeyeen sidii ay u dhici laheyd doorashado cadaalad ah.
Haddaba halkaan hoose ka dhageyso hadalka Wasiir Juxa.